April 15, 2021 - समृद्ध नेपाल
लक्डाउनमा ह्वात्तै घट्यो ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य !
सामूहिक राजीनामा अपराध हो सहभागी नहुनु : ओली
१० दिन पनि टिकेन दिपक मनाङेको मन्त्री पद !
आज ४ हजार २२ जना कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज भै घर फर्किए !
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लाका सहरी क्षेत्रका सबै स्कुल भोलिदेखि नै बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार यी क्षेत्रमा विद्यालय बन्द नगरे लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अति प्रभावित १४ जिल्लामा काठमाडौं ललितपुर कास्की रुपन्देही चितवन बाँके पर्सा भक्तपुर कैलाली मोरङ दाङ सुर्खेत बारा र बाग्लुङ